Sakafo tsy matavy: voankazo sy legioma misy kaloria kely Sakafo Nutri
Betsaka ny sakafo tsy matavy, legioma sy voankazo ny ankamaroany. Sakafo ambany kaloria izay afaka manampy anao hanapaka kaloria amin'ny sakafonao ary hanomboka hihena.
Na izany aza, raha ny fihenan'ny lanja dia ilaina tokoa ny tsy manadino ny mamatsy ny vatana ny otrikaina ilaina mba hanatanterahana tsara ny asany. Izany hoe ny sakafo ambany kaloria dia tsy maintsy mahavelona miaraka amin'izay. Ary ny ampahany tsara amin'ireto sakafo manaraka ireto dia mahafeno ireto fepetra roa ireto:
1 Legioma sy anana
1.1 Votoatiny avo
1.2 Green dia loko fototra
1.3 Legioma bebe kokoa izay tsy matavy
2.1 Ny paoma
2.3 Voankazo bebe kokoa izay tsy matavy
Ny ankamaroany dia mampifangaro ireo sakafo tsy matavy amin'ny legioma, ary marina izany. Ity vondrona sakafo ilaina ity dia manome sakafo ambany kaloria tsy tambo isaina. Ho fanampin'izany, ny fihinanana legioma ampy dia tena ilaina mba hahazoana lisitra lava misy otrikaina ilain'ny vatana. Amin'izany fomba izany, ny famenoana legioma fiantsenana legioma dia paikady lehibe iray mba hitazomana ny lanja sy ho salama hatrany.
Sakafo maro izay tsy matavy no manararaotra an'io rano io. Izany no tranga iray amin'ireo sakafo kaloria ambany be mpitia indrindra: seleria. 100 grama an'ity sakafo ity dia midika kaloria 14. Raha esorina ireo izay ilaina amin'ny fametahana azy, dia mijanona eo akaikin'ny aotra ny tarehimarika.
Sakafo iray hafa miaraka amin'ny rano avo be sy kaloria vitsivitsy (16 isaky ny 100 grama ny sakafo) dia kôkômbra. Ny kôkômbra dia singa iray tena tsara ho an'ny salady, fanelingelenana hijerena ny zava-misy fa sarotra amin'ny olona maro ny mandevona azy.
Green dia loko fototra
Ny asparagus 100 grama dia tsy misy afa-tsy kaloria 20. Afaka mahandro amin'ny fomba maro izy ireo - azonao atao ny manisy saoka, manendasa, na manetona azy ireo ho an'ny sakafo maivana sy mahavelona. Ny omarette asparagus dia hevitra tsara hafa.
Fangaro izay be mpampiasa amin'ny salady sy pizza, Ny arugula dia sakafo iray izay mendrika hodinihina mba tsy hahazoana lanja. Ny fihinanana kaloria an'ity legioma maitso ity dia 25 isaky ny sakafo 100 grama.
Raha efa azonao atao ny mihinana sakafo be mpinamana, Ny tsimoka any Bruxelles dia tokony hodinihinao. 100 grama an'ity legioma ity manan-karena vitaminina C tsy manome afa-tsy kaloria 43 izy ireo. Fa na ambany aza ny kaloria dia ny laisoa sy cauliflower, miaraka amina kaloria 25 ao anaty 100 grama.
Ny broccoli dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo legioma tokony hisongadina rehefa miresaka sakafo tsy matavy. Broccoli 100 grama dia manome kaloria 35. Ny kaloria kely ao aminy, ampiana amin'ny anjara biriky mahavelona azy, mahatonga an'io legioma io ho sakafo tsy azo alaina amin'ny sakafo mampihena lanja, ary koa amin'ny sakafo ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny.
Legioma bebe kokoa izay tsy matavy
Ampirisihina mafy hitazona ny fahasalaman'ny maso, Ny karaoty dia miavaka amin'ny fihinanana kaloria ambany ihany koa. 100 grama an'ity legioma ity dia maneho kaloria 37 fotsiny ho an'ny vatanao. Ireto legioma sy legioma manaraka ireto dia miavaka amin'ny fihinanana kaloria ambany ihany koa:
Farany, anana sy zava-manitra (persily, mint, basil, oregano, komina, kari ...) manana ny fahaizana manatsara ny tsiron'ny lovia izy ireo ho takalon'ny kaloria tena kely isaky ny sotrokely.
Amin'ireo sakafo rehetra tsy mampatavy anao, ny paoma dia iray amin'ireo malaza indrindra noho ny vidiny mirary sy ny fahafaha-manaony rehefa mihinana azy. Paoma 100 grama dia manome kaloria 52. Fa raha ny tena izy dia hijanona amin'ny kely kokoa izy ireo, satria tsy maintsy esorinao ireo izay ampiasain'ny vatana amin'ny fandevonan-kanina azy.
Marihina fa, ankoatry ny tsy fahampian'ny kaloria, ny paoma dia sakafo mahavelona be. Mba hampihenana ny lanja, ireo toetra mahavoky izay azony noho ny habetsahan'ny fibre avo dia tena ilaina.
Apple dia hevitra tsara amin'ny tsindrin-tsakafo, ary koa amin'ny sakafo atoandro na tsakitsaky. Ary, tsy toy ny tsakitsaky hafa, mitazona anao ho feno mandra-pahatongan'ny sakafo manaraka ho an'ny kaloria kely dia kely.
Raha mila voankazo misy kaloria ambany ianao dia tokony hieritreritra ny hampiditra voankazo voasarimakirana toy ny grapefruit, voasarimakirana, sokay ary clementines. Ireo voasarimakirana ireo dia tsy vitan'ny hoe manampy anao tsy hahazo lanja fotsiny, fa loharanon'ny vitamina C.
Voankazo bebe kokoa izay tsy matavy
Raha tianao ny voaroy, dia ho faly ianao hahafantatra izany Ny frezy 100 grama dia manome kaloria 30 mahery. Azonao atao ny mihinana azy ireo irery na manararaotra ny fahaizan'izy ireo amin'ny salady, malama, mofo ary salady.
Raha ny voankazo tropikaly no resahina, Tsara ny manamarika ny atin'ny kaloria ambany amin'ny papay (30 eo ho eo isaky ny sakafo 100 grama).
Pasteky 100 grama dia tsy maneho afa-tsy kaloria 30. Ho fanampin'izany, voankazo matsiro sy mahavariana izy io, ka izany no iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny fahavaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo tsy matavy